वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : आज कति नम्बर आयो??
आर्यालाई हेर्ने कामको भाग लगाएका छौं हामीले। बच्चा एउटै भएपनि एकात्मक परिवारमा बसीरहेको र दुबैको आ-आफ्नो ब्यस्त 'क्यारीयर' भएकाले समय ब्यवश्थापन अलिक जटिल भईदिँदोरहेछ। यो जटिलताले हामीलाई दुःख भने कत्तिपनि लागेको छैन, एउटा सुखद् चुनौतीका रुपमा लिँदै छोरीलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो समयको ब्यवश्थापन गरीरहेका छौं हामी।
छोरी स्कूलबाट घर फर्कने बेलामा म हुन्छु घरमा। 'लचिलो' प्राध्यापन पेशामा भएकाले यतिखेर समय निकाल्न सक्छु म। मेरो त्यसपछिको पहिलो काम ऊसंग दश-पन्ध्र मिनेट बसेर स्कूलका कुरा सोध्नुहुन्छ। उसले हातमुख धुने, लुगा फेर्ने काम सकेपछि खाजा बनाएर बाऊ-छोरी गफ गर्दै खानुमा कम्ति मजा छैनः)
स्कूलको पोशाकको सेतो शर्टको भने बिजोग भैसकेको हुन्छ ऊ फर्केर आऊँदासम्म। बाहुलाको नाडीमुनिको भाग त रंगीचंगी बनीसकेको हुन्छ। खेल्दा-खेल्दै अलिअलि धूलोमैलो अनुहारतिरपनि पुगीसकेको हुन्छ। बच्चा हुनाले यो स्वाभाविक हो, तर यसैलाई एउटा रमाईलोमा बदल्न मन लाग्यो मलाई र दुई हप्ताजति पहिलाबाट 'नम्बर' दिन शुरु भयो।
नम्बर दुईटा कुरामा। पहिलो, यहि शर्ट र अनुहारको फोहरलाई हेरेर दिने। कत्ति पनि फोहर नभए १०० हुने अनि फोहर देखिए अनुसार एक-एक नम्बर घटाऊँदै जाने। रमाईलोकै लागि यो 'सम्झौता' गरिएपनि यसले केहि न केहि असर भने देखाउन थालेको छ। सरसफाईमा आर्याले अझ बढी ध्यान दिन थालेको देखिईसकेको छ। नम्बर त ९८ भन्दा घटेको पनि छैन। रमाईलोको लागि गरेको कामलाई मैले पनि रमाईलै पाराले नम्बर दिन्छु, अस्ति एकदिन त १०० नै दिएँ, १-२ नम्बर घटाउन सक्ने ठाऊँ हुँदाहुँदै पनिः)
दोश्रोचाहिँ, लुगा फेर्ने, लुगा र जुत्ता मिलाएर राख्ने कुरा हेरेर नम्बर दिने। पहिलोमा भन्दा पनि धेरै सुधार आएको छ यसमा। पहिला 'लुगा फेर' भनेर पाँच-सातचोटि कराऊँदा पनि 'एकछिन क्या एकछिन! कस्तो थकाई लागीरा'छ आफ्लाई!' भनेर धेरै बेरसम्म अलमल गरीरहन्थी, उसका साथीहरु खाजा खाईवरी आईसक्दापनि उसले लुगा फेर्न थालेकै हुँदैनथ्यो। अहिलेचाहिँ दश-पन्ध्र मिनेटको 'भलाकुसारी'पछि "कौन बनेगा करोडपति"को स्टाईलमा "आर्या, तिम्रो समय शुरु भयो अब!" भनेर मैले भन्ने र उसले त्यसपछि फटाफट लुगा फेर्ने र आफ्ना सामान मिलाउने 'भद्र सहमति' पनि भएको छः)
दुबै 'विषय'का नम्बर घरको सेतो पाटीमा चढ्छन् हरेक दिन।
अब हामीलाई पनि नम्बर दिन थालेकी छे उसले, ऊ पनि के कम! ऊ भन्दा ढिला आउँदा दुबै विषयमा हाम्रो जाँच-पड्ताल हुन्छ र नम्बर चढ्छ सेतोपाटीमा।
Posted by Basanta at 10:17 PM
आश्मा May 24, 2013 at 11:13 PM
very lovely Aarya ! kasto ramailo lagyo yo lekha padhera, Dai ma ni aba yo niyem laagu garnu paryo shubhu laai he he